Ahụike: mgbake na-eme ka 'ịchọta' na-agbaso Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Health mgbake
Ebumnuche nke ihe riri ahụ na-adọrọ adọrọ karịa akụkụ ọ bụla nke ndụ riri ahụ. Nke a bụ eziokwu maka ị addictionụ ọgwụ ọjọọ dị ka ọ bụ maka ọgwụ ọjọọ ọ bụla. Iweghachite gbanwere mgbanwe ndị a. Nwayọọ nwayọọ, onye ahụ riri ahụ na-amụgharị otu esi 'chọrọ' nke ọma.
Maka ihe ndị ọzọ dị irè maka mgbake na mgbochi hụ usoro ntinye nke 3 nke Ụgwọ Ụgwọ na Quitting Porn:
Ụgwọ Ụgwọ Ụgwọ nke Ụgwọ Ụgwọ ahụ kwadoro atọ
Usoro ngbochi atọ nke ụgwọ ọrụ ahụ bụ Ụgwọ Ọrụ
Ihe ndị na-akwalite mmepụta nke oxytocin na ụbụrụ (njikọkọ, ọbụbụenyi, ọrụ afọ ofufo, mkpakọrịta anụmanụ, mmega ahụ, oge na ọdịdị, nri edozi ahụ ike, ụra mgbe nile, ịrụ ọrụ dị ka ịgba egwú, abụ, ịme ihe, egwuregwu, omume ndị na-egosipụta mmetụta dị ka eserese, ịbịaru, ide ihe na ihe ndị ọzọ) niile na-enyere aka belata ọchịchọ ndị ahụ bụ akara nke dopamine. Oxytocin na-enyekwa aka belata cortisol na usoro ahụ nke na-adịghị ahụ maka ọrịa na-emetụta ịda mbà n'obi na nrụgide.
O nwere ike iyi ka ọ bụ naanị 'ọgwụ' ma ọ bụ àgwà nke nhọrọ nke nwere ike ime ka ahụ gwụ ma ọ bụ nkụda mmụọ. Nlekọta anya zuru ezu maka itinyekwu ya na iwe ọ bụrụ na ewepụrụ ya, ga-eme ruo mgbe anyị dị njikere ịgabiga usoro nke iwepu 'iko site na ọnya' na ikwe ka ụbụrụ anyị weghachiteghachi ụgwọ ọrụ. Ụfọdụ na-akpọ ya 'na-agbanye' ụbụrụ.
Iji daa ima ma obu 'abụọ nkekọ', ọ dị anyị mkpa inwe nghazi dị mma nke dopamine na oxytocin. Ọ bụ ya mere ejiji ụdị ọ bụla, nke e ji nlezianya na-achọ ịhọrọ ọgwụ mmadụ, bụ ihe kachasị egbochi mmekọrịta ịhụnanya. Ngwadogwu ma ọ bụ ndị na-enwe nsogbu na-enwe mmetụta nke mmetụta uche, enweghi ike inye ịhụnanya, na-emetụ ma ọ bụ na-ama mkpa nke ndị ọzọ. Ọ dị anyị mkpa inyere ha na onwe anyị aka, weghachite uru nke ibi ndụ ndụ zuru ezu n'ụzọ dị mma na nke okike.
<< hav Addụ ọgwụ ọjọọ